Sekuvuliwe kwabafuna ukungenela uMiss SA
IZINTOKAZI zakuleli ezisebenza ngaphansi kwenhlangano ehlela umcimbi kaMiss SA, ezizobonakala esikhangisweni sakamuva njengoba sekuvuliwe ukuthungatha izintokazi ezizoncintisana emcimbini walo nyaka. Kulezi zintokazi kubalwa uThato Mosehle, Shudufhadzo Musida noNatasha Joubert. Isithombe: SITHUNYELWE
Nokubongwa Phenyane | May 25, 2021
KUZOVALWA ngoJuni 24, ukufaka izicelo ezintokazini ezifuna ukuzama inhlanhla emcimbini walo nyaka kaMiss SA, ozoba ngo-Okthoba.
Isicoco sangonyaka odlule sakhala semuka nentokazi yaseLimpopo, uShudufhadzo Musida.
Kuvulwe izolo ngehora lesihlanu ntambama ukungenela.
Esikhangisweni esikhishwe izolo ntambama ezinkundleni zokuxhumana naseziteshini ezihlukene zethelevishini, kubonakala izintokazi ezake zaba kulo mcimbi, uShudufhadzo Musida, Thato Mosehle noNatasha Joubert, bekhuthaza izintokazi ukuthi zingagajwa wuvalo kodwa mazenze into ezozijabulisa empilweni.
Isikhangisi siyoze sivalwe ngosuku lokugcina lokungenela umncintiswano.
UStephanie Weil, okhulumela inhlangano iMiss South Africa Organisation ehlela umcimbi, uveze ukuthi sebekulindele ngabomvu ukuhlangana nentsha ezongenela umcimbi walo nyaka, bese beyethula kubantu bakuleli.
“Kuyasijabulisa ukuthi umcimbi kaMiss South Africa uyaqhubeka nokusiza intsha efuna ukufeza amaphupho ayo nokuzwakalisa okuhle efuna ukukwenza kuleli, uma idla umhlanganiso kulo mcimbi. Kulo mcimbi siyaqhubeka nokuqinisekisa ukuthi ukungenela kuba lula kakhulu njengoba kungekho amafomu agcwaliswayo futhi kungasahanjelwa zifundazwe. Abafuna ukungenela bangangena ku-website yethu ethi:www.misssa.co.za lapho bezophendula khona imibuzo embalwa, bafake nezithombe zabo,” kuchaza uStaphanie.
Uveze ukuthi uShudufhadzo, kuzothi ngoDisemba walo nyaka ayomela leli emcimbini kaMiss World, ozoba sePuerto Rico.
UShudufhadzo uveze ukuthi njengoba uhambo lwakhe kulesi sihlalo seluyela emaphethelweni, angakuveza ngalo wukuthi lube ngolufeza amaphupho akhe.
“Lolu hambo kalugcinanga ngokungikhulisanga nje kuphela, kodwa lungenze nami ngakwazi ukusiza abanye. Ngibonile ukuthi amaphupho ngempela ayafezeka futhi nempilo yami ishintshe kakhulu. Lokhu ngiyokuxoxela izizukulwane zami ezizayo. Ngiyabonga kakhulu ngethuba,” kuchaza uShudufhadzo.